नेकपाको बिवादले लियो नयाँ मोड, दाहालको प्रस्तावमा यसरी हदै छ फेरी एकता ! – jagritikhabar.com
नेकपाको बिवादले लियो नयाँ मोड, दाहालको प्रस्तावमा यसरी हदै छ फेरी एकता !
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपाले राजनीतिक तथा संख्यात्मक रुपमा परास्त भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता लम्ब्याउन खोजेको निष्कर्ष निकालेको छ । कानुनी छिद्र र प्रक्रियागत त्रुटि देखाउँदै ओली कुर्सीमा रहिरहने प्रयासमा लागेको भन्दै सो पार्टीले ओलीलाई त्यो मौका नदिन गृहकार्य थालेको हो।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट तथा आधिकारिकताको विषयमा निर्वाचन आयोगमा भएका केही प्रक्रियागत त्रुटिका कारण उत्पन्न जटिलतालाई ध्यानमा राख्दै ओलीविरुद्ध चाल्ने कदमका विषयमा सचेत हुने सो पार्टीका नेताहरुले बताए।
ती नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध संसदीय दलमा जाने कि एकै पटक संसदमा अविश्वास प्रस्ताव लैजाने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।संख्यात्मक र कानुनी पक्ष स्पष्ट नभई कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुँदैन।
नेकपाका एक स्थायी कमिटीका सदस्यले भने, ‘सर्वोच्च अदालत र आयोगमा जाने क्रममा केही प्रक्रियागत विषय नमिल्दा जटिलता उत्पन्न भएको छ। त्यसैलाई प्रयोग गरेर ओली सत्ता लम्ब्याउने चाल चल्दैछन् ।
आगामी दिनमा चालिने कदममा कुनै कानुनी छिद्र प्रयोग गर्न नसक्नेगरी र प्रक्रियागत त्रुटि नहुने गरी अघि बढ्छौँ। प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध परेको रिटमाथि बहस चलिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारको संवैधानिक हैसियतका विषयमा निवेदन र वकिलहरुको मत फरक परेको थियो।
त्यस्तै, निर्वाचन आयोगमा पनि पार्टीको आधिकारिकताको विषयमा निर्धारित समयभित्र दाबी नगरेको कारण जटिलता उत्पन्न भएको छ । आयोगले दुवै समूहलाई आधिकारिकता नदिने भनेर पन्छिँदै आएको छ ।
‘आफ्नो शासनको सबैभन्दा ठूलो मुद्दामा पराजित भएपछि ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्ने हो। तर, उहाँ राजीनामा होइन, विभिन्न अड्चन निकालेर अवरोध गरिरहनुभएको छ,’
अर्का स्थायी कमिटीका सदस्यले भने, ‘यसले गर्दा आगामी दिनमा कुनै प्रक्रियामा जाँदा सबै विषयलाई ध्यान राख्न आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिएको अवस्थामा उनलाई हटाउने विकल्प भनेको संसदीय दल वा संसदमा अविश्वास प्रस्ताव हो ।
संघीय संसदमा अर्थात् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका गरी नेकपाका २ सय १७ जना सांसद छन्। प्रतिनिधिसभामा १ सय ७२ छन्। राष्ट्रियसभामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बाहेक ४५ सदस्य छन्।
संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित हुन १ सय ९ सांसद आवश्यक पर्छ । तर, दुवै समूहले करिब बराबरी सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
‘नेक टु नेक अवस्था रहेकाले दुवै पक्ष संसदीय दलमा जान हिचकिचाइरहेका छन्,’ एक सांसदले भने, ‘संख्यात्मक रुपमा प्रचण्ड–नेपाल पक्ष अलिकति बलियो छ। तर, दुवै पक्षबीच अन्तर धेरै नहुँदा परिणाम जे पनि आउनसक्छ।’
राजनीतिक रुपमा पार्टी विभाजन भइसकेको अवस्थामा त्यसरी संसदीय दलमा गएर मतदान गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा प्रचण्ड–नेपाल पक्षको छ। संसदीय दलको विधानको धारा ३२ मा एक चौथाइ सांसदले संसदीय दलका नेताविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संसदीय दलका उपनेतालाई सम्बोधन गरेर अविश्वास प्रस्ताव राखे उपनेताले प्रमुख सचेतकलाई पन्ध्र दिनभित्र बैठक राख्न निर्देशन दिनु पर्ने व्यवस्था छ । प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पुस ९ गते बैठक राखेर संसदीय दलका नेताबाट ओलीलाई हटाएर प्रचण्डलाई निर्वाचित गरेको थियो।
टाढा छ नेकपाको मिलन बिन्दु
सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदिएसँगै नेपालको राजनीति पुनः पुस ५ अघिको अवस्थामा फर्किएको छ । देशको राजनीति सर्लक्कै पछाडि फर्किए पनि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विवाद पुस ५ भन्दा धेरै अघि बढिसकेको छ ।
उता ओली पक्षले पनि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कार्यकारी अधिकार खोसिसकेको छ । यद्यपि ओली समूहले प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्षमा कायम राखेको छ र अन्य नेतालाई पनि कारबाही गरेको छैन ।
नेकपाको तल्लो तहमा भने दुवै पक्षले अर्को पक्षलाई कारबाही गर्दै कमिटी पुनर्गठन गरिसकेका छन् । नेकपा राजनीतिक विभाजनको गहिराइमा पुगिसके पनि कानूनी विभाजनमा भने गइसकेको छैन ।
यस्तोमा धेरैले नेकपा मिल्दियोस् भन्ने मनोकामना राखेका छन् । पार्टी भित्र र बाहिरबाटै पनि कतै नेकपा फेरि मिल्नुपर्छ र मिलि पो हाल्छ कि भन्ने आशा प्रकट भइरहेकै छन् ।
पछिल्ला घटनाबाट पाठ सिक्दै सबै नेताले आ–आफ्ना सीमा र सबलता बुझ्न सक्दा नेकपा एकीकृत रूपमा अघि बढ्ने उनको धारणा छ । पार्टी मिल्नै पर्ने मत अर्का केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेको पनि छ ।
‘पार्टी एकताको निम्ति शुरू गर्नुपर्ने दुई अध्यक्षले हो’ गौतम भन्छन्, ‘दुवै अध्यक्षले पार्टी एकीकरण गर्ने विषय उठाउनुभएन । पार्टी त विभाजन भइसक्यो अब मिल्न सक्दैन भन्ने प्रचण्डको भनाइ आयो र पार्टी फुटाएको हामीले होइन फुटाएको केपी ओलीले हो भनेर भन्नुभएको छ ।
पार्टी फुटाउने काम प्रचण्ड माधवहरूले हो भनेर यतातिर भनेको छ । उल्टै पार्टी फुटाएको आरोप आफूलाई लगाएको प्रति पनि गौतमको चित्त दुःखाइ छ । उनी भन्छन्, पार्टी फुटाउने वामदेव हो भनेर दुवैले आ–आफ्नो तरिकाले भन्नुभएको छ ।
जसले जे काम गर्नुभएको छ त्यसको जिम्मा नलिने चलन छ । राम्रो भए मात्रै आफूले जिम्मा लिने नराम्रो भयो भने त्यसको दोष अरूलाई लगाउने चलन छ ।
प्रचण्ड–माधव पक्षीय नेता गेरै प्रतिनिधिसभा विघटन गलत थियो भनेर ‘रियलाइज’ गरेर ओली पक्ष पार्टीमा नआउँदासम्म एकताको वातावरण नबन्ने बताउँछन् ।
‘संसद विघटन असंवैधानिक हो भन्ने कुरा न्यायालयले पुष्टि गर्यो उनको भनाइ छ, ‘तर पनि त्यसलाई रियलाइज नगर्ने कुरा गलत हुन्छ । यत्रो घटना भइसकेपछि त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिएपछि यसले एकताको वातावरण बनाउँछ । त्यसलाई स्वीकार नगर्दाखेरी त्यसले अर्को बाटो लिन्छ ।’
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आत्मालोचना गर्दै राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको हैसियतले गरिएको निर्णय अदालतले अवैधानिक ठहर गर्दै उल्ट्याएपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर सरकारबाट अलग
हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेता गौतमले पार्टी एकता र राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको गाँठो फुकाउने पहल पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले लिनुपर्ने पनि बताए ।
प्रचण्डले एकताको पहल गर्नुपर्छ
जसले मैले जितेको छु भनेर भन्नुभएको छ उहाँबाट शुरु हुनुपर्ने हो । हिजो प्रचण्डले विभिन्न मिडियामा बोल्नुभएको प्रतिक्रिया मैले सुने । उहाँले चाल्नुभएको कदम सही सावित भएको छ केपी ओलीले चाल्नुभएको कदम गलत सावित भएको छ र त्यो असंवैधानिक छ भनेर भन्ने छ ।
यस्तो अवस्थामा फेरी पुनः पार्टी एकीकरणको निम्ति प्रचण्डले भूमिका खेल्नुपर्ने हो । उहाँले भन्नुपर्ने हो । पराजित भएको ९ओली०ले भनेर त अरुले मान्दैनन् । त्यसैले जसले आफूलाई म विजयी भए भनेर भन्छ उसले भन्ने हो ।
तर प्रचण्डले त्यस्तो भन्नुभएको मैले पाइन । पार्टी एकता हुन्छ पार्टी एकता गर्नुपर्छ अब सबै साथीहरु एकजुट हुनुहुन्छ म उहाँहरुलाई आव्हान गर्छु एकता हुनको निम्ति भनेर भन्नु भन्दा अब सबै मैले बनाएको पार्टीमा आउनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ ।
त्यो भएर जिम्मेवारी कसैले पनि लिनुभएन । लिनुपर्ने जिम्मेवारी यसपटक प्रचण्डले हो । माधव नेपालले हो । पार्टी फुटिसक्यो त्यो फुटेको पार्टी गइसक्यो अब हामीसँग भएको पार्टीमा आउनुपर्छ भन्ने उहाँहरुको अभिव्यक्ति पाइयो । त्यो अभिव्यक्ति उहाँहरुको निम्ति त सही होला तर मलाई राम्रो लागेन ।